Kooxda Barcelona oo qorsheynaysa inay shaqada ka cayriso Tababare Quique Setien – Gool FM
Kooxda Barcelona oo qorsheynaysa inay shaqada ka cayriso Tababare Quique Setien
(Barcelona) 28 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheynaysa inay shaqada ka cayriso tababaraheeda Quique Setien dhammaadka xilli ciyaareedkan, haddii uusan qaab ciyaareedka kooxda wax ka bedelin oo uusan xilli ciyaareedkan koob muhiim ah u qaadin.
Shabakadda ciyaaraha ee Goal.com ayaa fahamsan in Kooxda Barcelona ay isku diyaarinayso inay cayriso Quique Setien haddii uusan la imaan natiijooyin wax ku ool ah oo aysan kooxdu ku guuleysan midkood horyaalka La Liga ama Champions League kal ciyaareedkan.
Tababarahan halyeyga ah kaasoo shaqada garoonka Camp Nou qabtay bishii Janaayo markii uu booskaas kala wareegay Ernesto Valverde ayaa lumiyey kalsoonidii qolka labiska ee Barca, halka maamulka sare ee kooxdu aysan sidoo kale ku farraxsanayn bandhigyadii dhowaa oo ay kooxdu sameyneysay.
Ilaa iyo inta ay soo bandhigto Barca saameyn weyn inta ka hartay xilli ciyaareedka 2019-20 ayaa la fahamsan yahay inay lama huraan tahay inuu Setien ka tago shaqadiisa xagaaga.
Tababarihii hore ee Real Betis ayaa la siiyay labo sano iyo bar qandaraas ah bisha Janaayo, si kasta oo ay wax u jiraan waxay u muuqataa in uusan awood u yeelan doonin inuu arko wax ka badan bilooyin yar heshiiskan oo sii socda.
Dhinaca kale awoodda qolka labiska ee xiddigaha kooxda Barcelona waa mid xooggan, waxaana hoggaaminaya xiddigo ay ka mid yihiin Lionel Messi iyo Gerard Pique, kuwaasoo ka soo horjeestay Setien sababo la xiriira jahwareer ka timid xeeladdiisa ama taatikadiisa iyo ku qanacsanaan la’aantooda faallooyinkiisa uu bixiyo marka uu Saxaafadda hor-joogo.
Si kastaba ha noqotee, Setien ayaan marnaba ahayn dooqa koowaad ee Barcelona kaddib markii la cayriyey Valverde, iyadoo Ronald Koeman iyo Xavi Hernandez ay labaduba hoos u dhigeen oo iska diideen inay qabtaan shaqadaan ka hor inta aan loo magacaabin 61-sano jirkaan.
Kaddib markii la sameeyey isku aadka afar dhammaadka tartanka FA Cup-ka, waa kuwee Kooxaha ugu badan ee Koobkaan ku guuleystay?